Iindaba-Abaphambukeli abathetha isiTshayina kakuhle benza oku!
Kutshanje, umfundi onesiseko esipheleleyo se-zero, emva kokufunda iiklasi ezintathu, undixelele ukuba uzotshintsha abe ngutitshala ogxile kwisiNgesi somlomo kuba engafuni ukufunda igrama yesiTshayina okanye izinto ezinxulumene ne-HSK, kodwa wayefuna ukufunda Olunye ulwimi lobomi bemihla ngemihla, njengokuthi Ukuthenga itikiti lomoya, indlela yokuthenga eTaobao, njl. .. kakuhle… Ndilibonile inqanaba lakhe laseTshayina elizayo.
Nokuba ufunda luphi ulwimi, kubaluleke kakhulu ukubeka isiseko. Igrama kunye nesigama zisisiseko. Ndifuna ukubaleka phambi kokuba ndime, kwaye andinakukwazi ukunyamezela ukuphindaphinda kancinci. Sinye kuphela isiphelo kwaye akunakwenzeka ukuba sinxibelelane ngolu lwimi. Ngokufanelekileyo, uninzi lwabafundi bolwimi lwesibini bawele kwinyathelo lokuqala, kwaye ekuphela kwento abanokuyifunda ukuba banomdla wokuphumelela ngokukhawuleza kwaye inzuzo ekhawulezileyo inokufundwa kuphela.
Abaphambukeli abaninzi abathetha isiTshayina ngokutyibilikayo kwaye basebenzise amagama ayinyani esiwafumanayo ebomini, benza njani?
Nokuba ufunda isiTshayina e China okanye hayi, kufuneka kubekho abantu baseTshayina abakungqongileyo ukunxibelelana nawe. Ngamafutshane, ulwimi luya kuba nomhlwa. Izinto ozifunda eklasini ziya kulityalwa ukuba awusebenzisi rhoqo ebomini. Lo mzalwana mncinci uthengisa izikhumbuzo eMorocco wafunda isiTshayina kwimibhobho kwaye wayisebenzisa kubakhenkethi ngosuku olulandelayo. Wavula umlomo wakhe xa wayevula umlomo wakhe kwiiqhulo ezithandwayo zase-China ezikwi-Intanethi.
Ngethamsanqa, siphila kwixesha lokuqhuma kwe-Intanethi, izixhobo zokufunda kwabelwana ngazo kwihlabathi liphela, kwaye singalisebenzisa ixesha eliqhekekileyo ukufunda isiTshayina esithethiweyo kunye nevidiyo zaseTshayina; ukuba sifuna ukukhumbula abalinganiswa baseTshayina, oonotsheluza badanyaza. Oothixo abakhulu abalungileyo ekufundeni ulwimi, abangafumani amawaka eeyure kunye nokuqonda iilwimi zasemzini ngeentsuku ezimbalwa, bayakhohlisa uYindi.
Thatha inxaxheba kwimisebenzi yolwimi olutsha:
Thatha inxaxheba ekuthatheni inxaxheba kwiintetho, kwiidrama, ukusingathwa, ekuculeni, njl., Nantoni na oyithandayo. Xa ulungiselela le misebenzi, ngokuqinisekileyo awufuni kuphulukana nobuso bakho eqongeni. Ngeli xesha, uya kuzinkqaya izinto zolwimi lwangaphandle kakuhle, kwaye uya kucinga ngononophelo malunga nokukhetha amagama nokwenza izivakalisi, kunye nesantya sokubiza kwakho. Ngale ndlela uya kufunda isiTshayina kwiminyaka eliqela kamva. Kunzima ukulibala.
Sebenzisa iselfowuni ukurekhoda kwaye umamele isandi sokuqala seTshayina lakho:
Rekhoda isiqwenga samaTshayina osithetha mihla le, ngakumbi kwelo binzana. Ndiyakholelwa ukuba emva kokumamela indlela oziva ngayo ngawe, awusayi kuba nesibindi sokuhleka kwabanye. Ngexesha lale nkqubo, uyakufumanisa ukuba awazi ukuba ungazithetha njani izinto oqhele ukuzisebenzisa ebomini bakho, ezinje ngesinki yokuhlamba imifuno, iimpompo, njlnjl. yesandi, kunye negrama ongayiboniyo inokuba iphosakele. Fumana ingxaki yakho kwaye unesiqingatha semfazwe.
Thobeka, awukwazi ukuphatha yonke into:
Ukuthozama akuyomlinganiswa owamkelwa lilizwe lonke, kodwa unokuzithemba, ungazikhukhumeli, bakhona abanye ngaphandle, kwaye awusoze ufunde naluphi na ulwimi.
Ngethuba nje ungeyena isithethi seCandelo loMphathiswa Wezangaphandle, uyakuba uyaphazama xa wenze impazamo, kwaye awuyi kuhlawuliswa. Logama usitsho, uninzi lwabantu baseTshayina banokuluqonda, kwaye bahlala benyamezele ukuthetha isiTshayina kubantu bamanye amazwe. Xa behlazekile okanye belahlekile ebusweni, baya kuhlala bekhumbula eli nqaku. Ngaphandle kokusebenzisa isivakalisi, ingxaki ayinakuze ibhaqeke.
Fumana uphawu lweelwimi onokuluxelisa:
Fumana umlinganiswa ofanayo nelizwi lakho kwaye uyathanda ukulinganisa indlela athetha ngayo. Oku kuyasebenza kakhulu ekuphuculeni ukubiza kwakho, isingqisho, isantya sokuthetha, njl.